Izindlu e- Dammuso, Pantelleria, Sicilia
Pantelleria, Sicilia, i-Italy
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Il Mulino Di Scauri
I-"Il Mulino di Scauri" itholakala phakathi kwezindawo zasemaphandleni nolwandle lwesifunda esingaziwa, esinye sesiqhingi esihle nesinethezekile. Ikhaya lethu lamaholide lihlanganisa amafulethi abantu ababili/abane, ngalinye linekhishi nesiqandisi, elinamaveranda amahle ukuze uphumule, udle, futhi ujabulele ukushona kwelanga okumangalisayo kwase-Afrika. Amafulethi azungezwe ingadi yaseMedithera futhi ahlotshiswe ngedamu lokubhukuda.
Ubulula be-decore, ukuhlanganiswa okuvumelanayo kwesakhiwo nesimo semvelo nesemakhaya, indawo yasemaphandleni eluhlaza kanye nolwandle oluhlaza okwesibhakabhaka, umoya ophumuzayo, ukushona kwelanga okuthakazelisayo, kwenza, ngokubuka kwethu, ukuhlala kwakho kungenakulibaleka!
I-Scauri ingenye yezindawo ezinhle kakhulu zesiqhingi, lapho ujabulela khona ukushona kwelanga okuhle. Futhi yisona sodwa isifunda esinekhemisi, isitolo esikhulu, isitolo sikagwayi, indawo yokubhaka, iposi, icinema, izindawo zokudlela, njll. Ngemizuzu embalwa ungakwazi ukufinyelela ama-cove amahle kakhulu nabukekayo, futhi kuphinde kube yindawo enhle yokuqala yokuhamba ngezinyawo, ukuhamba ngebhayisikili, noma ukuhamba ngesikebhe.
Ibungazwe ngu-Il Mulino Di Scauri
Singabantu ngokugcwele izivakashi zethu ukuze uthole ulwazi, izeluleko, izidingo ezikhethekile. Kodwa futhi, uma kuthanda, ukuxoxa futhi uphuze ingilazi yewayini ekushoneni kwelanga!
Inombolo yepholisi: 3318101111